Brunei Darussalam: fonosana ho an'ny fialan-tsasatra any Temburong no natomboka
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Brunei Darussalam: fonosana ho an'ny fialan-tsasatra any Temburong no natomboka
BRUNEI DARUSSALAM - Amin'ny ezaka mitohy amin'ny fampiroboroboana an'i Brunei Darussalam ho toerana fizahan-tany tsy manam-paharoa, ny Departemantan'ny Fampandrosoana fizahan-tany eo ambanin'ny Minisiteran'ny loharanon-karena voalohany sy ny fizahantany ankehitriny
BRUNEI DARUSSALAM - Tamin'ny ezaka tsy tapaka nataony mba hampiroboroboana an'i Brunei Darussalam ho toerana fizahan-tany tsy manam-paharoa, ny Departemantan'ny Fampandrosoana ny fizahan-tany eo ambanin'ny Minisiteran'ny loharanon-karena voalohany sy ny fizahan-tany dia nanangana fonosana valo (8) vaovao tsy manam-paharoa sy manintona 3 andro 2 alina Temburong Holiday.
Ireo fonosana ireo dia novolavolaina tamin'ny fiaraha-miasa niarahan'ny sampana fampandrosoana ny fizahantany niaraka tamin'ny biraon'ny distrikan'i Temburong sy ireo mpiasan'ny Tour Temburong. Ny fivarotana ireo fonosana ireo dia hanomboka amin'ny 1 septambra 2016 ary mikendry indrindra ny vanim-potoana fialantsasatra ho an'ny sekoly desambra ho avy izao.
Tonga nanotrona ny lanonana ny minisitry ny loharanon-karena voalohany sy ny fizahantany, Dato Seri Setia Awg Hj Ali bin Hj Apong. Nandritra ny lahateniny dia nanentana ny mpandray anjara rehetra momba ny fizahantany ny Minisitra; masoivoho, zotram-piaramanidina, mpamatsy fampiantranoana ary koa vondrom-piarahamonina eo an-toerana mba hiara-hiasa sy hiara-hiasa amin'ny fananganana an'i Temburong sy ny toerana fizahan-tany any an-toerana amin'ny ankapobeny ho toerana fialantsasatra tianay indrindra.
Ny minisitera dia maniry mafy ny hanao ny Distrikan'i Temburong ho toerana fizahan-tany voalohany amin'ny faritra sy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Mifanaraka amin'ny tanjon'ny Departemantan'ny Fampandrosoana fizahan-tany ny fanamafisana ireo vokatra telo voalohany ao amin'ny firenena izay misy an'i Temburong, Kampong Ayer ary Bandar Seri Begawan. Antenaina fa ity fampielezan-kevitra ity dia handrisika ny Broneyianina ary koa ny mpizahatany vahiny & mpitsidika handeha hanao fialantsasatra any amin'ny toerana itodiana.
Teo koa tamin'io hetsika io ny Foreign Dignitaries, ny Sekretera maharitra, ny sekretera lefitra maharitra, ny lohan'ny tanàna, ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, ny masoivohon'ny fizahan-tany, ny hotely sy ny mediana. Ny fonosana fialantsasatra Temburong dia manasongadina safidy fidirana mahaliana natokana ho an'ny mpivady volan-tantely toy ny fijanonana mandritra ny alina ao amin'ny Ulu-Ulu Resort mahafinaritra, fotoana mahafinaritra ao amin'ny toeram-pialana ala mandavantaona ho an'ny fianakaviana na mankafy glamping mahafinaritra (traikefa mahafinaritra) miaraka amin'ireo namana manamorona ny ony. Temburong.
Ireo mpamaky fialantsasatra mividy an'ireto fonosana mahaliana ireto dia hahazo ihany koa traikefa fisakafoanana tsy manam-paharoa amin'ny sakafo matsiro sy matsiro eo an-toerana rehefa mankafy ny fomba fijery sy ny feon'ny ala tropikaly madio.
Ny fonosana fialantsasatra any Temburong dia misy koa hetsika fifandimbiasana toa ny kayak, ny fox manidina, ny dia an-ala sy ny maro hafa; ary koa ny hetsika ara-kolontsaina toy ny fitsidihana ny trano fandraisam-bahiny nentim-paharazana izay hahazoan'ireo mpitsidika hihaona sy hiarahaba ny 'Tuai Rumah' ary hiaina ny fitiavana mandray ny kolontsaina Iban.
Hong Kong Airlines dia manamafy ny filaharana ho an'ny A9 fanampiny
London dia manazava ny tantarany